Hetauda Khabar - मिर्गौला निकालेको विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा समिति गठन
मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले बिरामीको मिर्गौला निकालेको विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । प्रमुख विषेशज्ञ पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा आइतबार सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.पुकार चन्द्र श्रेष्ठ, वीर अस्पतालका युरोजोलिस्ट डा. अनिल श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सहसचिव सनत केसी, उपसचिव डा. भवनाथ खतिवडा, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव शम्भु रेग्मी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रेवतीरमण शर्मा सदस्य छन् । समितिले दिएको प्रतिवेदन संसद् र सरकारलाई बुझाउने मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । सांसदहरूले छानबिनको माग गरेकाले समिति गठन गरिएको उनले जनाए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
नुवाकोट विदुर नगरपालिका–१२ का ३२ वर्षीय शिवप्रसाद रिमालको शल्यक्रियाका क्रममा २५ जेठमा विनाअनुमति मिर्गौला निकालिएको थियो । सो विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि सांसदहरूले छानबिन समिति गठन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए ।